Xildhibaanka kursiga iibsadayooow gondahaaga ka day geeridii galbeed laga sheegay 'Laba waddo mid dooro'
Saturday August 29, 2015 - 00:20:01 in Wararka by Web Admin
Golaha Baarlamaanka Federaalka oo jirsaday muddo saddex sano ah, isagoo qabtay howlo intooda badan dhaliilo aan la koobi karin ay ku wareegsan yihiin oo ku saabsan inuu ka gaabiyay hwolihii looga fadhiyay ayaa waxaa intaas oo dhan uga sii darnaaday c
Golaha Baarlamaanka Federaalka oo jirsaday muddo saddex sano ah, isagoo qabtay howlo intooda badan dhaliilo aan la koobi karin ay ku wareegsan yihiin oo ku saabsan inuu ka gaabiyay hwolihii looga fadhiyay ayaa waxaa intaas oo dhan uga sii darnaaday culeyskii ugu weynaa ee soo food saaray kaddib guddoonka Golaha gacanta laga saaray mooshin la doonayo in xilka looga qaado Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo lagu soo eedeeyay qodobadii ku qornaa 9-kii bog ee ay soo gudbiyeen 93-ka Mudane.
Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan aqoonyahanada, siyaasiyiinta dadka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda waxay siyaabo kala duwan uga hadleen mooshinka xasaasiga ah ee Madaxweynaha laga gudbiyay, iyagoo 85% isku raacay in xilligaan uusan ku habooneyn mooshinka, iyagoo maqaarka meelo dal daloola ka dayaya.
Qeyla dhaanka qiilka loo sameynayo ee ka soo yeereysa, inkasta oo ay xor u yihiin, hadana Baarlamaanka Federaalka ayaa looga fadhiyaa inuu ka tallaabsado tijaabadii ugu weyneyd ee ka meyri karta rubuc ka mid ah ceebihii laga sheegayay, isla markaana dib u soo celineysa kalsoonida ay ku qabaan shacabka ay magacooda matalaan ee intooda badan aaminay inay Xildhibaanadu kursiga iibsadeen macaashka ugu weynna uu ka soo galo howlaha mooshinada ee aan wax dan ah ka lahayn dal iyo dad toona.
Ma aha wax cusub in Baarlamaanka Federaalka uu kala saaro haddii ay isku dhacaan Madaxtooyada iyo Wasiirka koowaad ay ku kala saari jireen codka Mudanayaasha Baarlamaanka, iyadoo laba Ra'iisal Wasaare oo soo maray xukuumadda Madaxweyne Xasan degdeg u xaliyay, kaddib markii ay waayeen kalsoonida Golaha.
Si kastaba ha haatee inkasta oo Soomaalida cusub tahay Madaxweyne waayay codka kalsoonida Baarlamaanka, hadana waxaa is barbar yaala laba sababood oo mid kasta culeyskeeda wadata.
1. In Baarlamaanka uu sameeyo isbedel dhinaca xukuumadda ah soona doorto Madaxweyne cusub oo soo dhisa dowlad kahor inta uusan wakhtiga ka dhicin, isla markaana isagoo kaashanaya waaya aragnimadii uu ka dhaxlay xukuumadii ka horeysay uu saxo eedeymaha faraha badan ee Golayaasha Xukuumada Federaalka.
2. Haddii uu Baarlamaanka isku ka meermeero meel marinta mooshinka luqunta ugu jira, waxaan cidna daah ka saarneyn inay ku dhaceen imtixaankii ugu weynaa ee soo maray taariikhda, cimriguna ugu dhammaanayo meel cidlo ah.
Madaxweyne Xasan oo isagu horay uga horjeestay mooshinka laga gudbiyay, ayaa markaan godkiisa biyo ugu soo galeen, isagoo geed dheer iyo mid gaaban u koray sidii loo kansali lahaa mooshinkaasi, isla markaasina shirar badan la qaatay guddoonka Baarlamaanka, waxaana markaan heysata mahmaahdii ahayd "Ka hari weysaye waa ku heysataa!!".
Xaqiiqdu waxay tahay in odayga markaan uu booska banneeyo, mar haddii uu shaqada ka ceyriyay laba Ra'iisal Wasaare isagoo u maray Baarlamaanka ma jirto sabab diideysa in cod la geliyo kalsoonidiisa xitaa haddii ay hal toddobaad ka dhiman tahay mudada xukuumadda.
Mooshinka cudurka ku noqday Madaxweynaha wuxuu daawo u yahay sharafta iyo sumcadda Baarlamaanka oo caddeyn u noqoneysa awoodda uu u leeyahay inuu xaliyo mushkiladaha ku yimaada qaanuunka dowliga ah ee dalka, mar haddii taa la waayana mugdi ayay ku jirtaa in dalkeena uu helo dowlad badbaado u noqota dadkeeda iyo dalkeeda.
Waxaa Qoray: Qorane Axmed Saciid